कोषाध्यक्ष यादवको आत्मघाती गोल, समीक्षाको खाँचो :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
कोषाध्यक्ष यादवको आत्मघाती गोल, समीक्षाको खाँचो
पार्टीभित्रकै आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेस कास्कीका युवा नेता रामजी बादल मारिए । उनी देउवा पक्षमा खुलेका इमान्दार थिए । हत्या गर्नेहरू कोइराला पक्षका थिए । केन्द्रमा दुवै पक्षका नेताहरू एकढिक्का भएर घटना सामसुम पारियो भन्ने चर्चा पनि चल्यो । अपराधकर्ममा खेतालाका रूपमा प्रयोग भएकाबाहेक अरुले उन्मुक्ति पाएकाले सायद यो अनुमान लगाइएको होला ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको यो घटना तुरुन्तै छताछुल्ल भएको थियो । यस्ता घटना अन्य पार्टीभित्र पनि हुने गरेका छन् । माओवादीभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्षका क्रममा सयौं नेता तथा कार्यकर्ता मारिएका घटना समयक्रमसँगै बाहिर आउने क्रम जारी छ । नेकपा एमालेभित्र पनि तराईमा केही नेताहरू आन्तरिक शक्ति संघर्षका क्रममा मारिएका घटनाहरू छन् । पार्टीभित्र आफ्नो अवसरको मार्गप्रशस्त गर्न अनेकथरी रणनीति बनाएर प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउने प्रचलन एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको अंग नै मानिन्छ । अनेकथरी अभियोग लगाएर घोषित रूपमै ज्यान लिने प्रचलन कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्वाभाविक मानिन्छ ।
बहुदलीय शासन व्यवस्था अंगालेका विकासोन्मुख मुलुकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चर्को भए पनि भौतिक भिडन्त गर्ने र ज्यानै लिनेसम्मका हर्कत कमै हुन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास नयाँ हो । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका दलहरूको इतिहास ७० वर्ष लामो भए पनि यी दलहरूले अधिकांश समय जनाधिकार प्राप्तिको संघर्षमै बिताएका छन् । जब सत्ताको अवसर प्राप्त हुन्छ, तब आन्तरिक शक्ति संघर्षले विकृत रूपधारण गरेको देखिन्छ ।
उम्मेदवार चयनको विषयमा भएको सामान्य विवाद भौतिक भिडन्तमा परिणत हुनु नेपाली कांग्रेसकै बेइज्जती हो । त्यसमा पनि यो प्रकरणमा यस्ती नेतृ जोडिएकी छन्, जसको राजनीतिक उदय अत्यन्त पीडादायी दुर्घटनाबाट भएको हो । आफ्ना पति चन्द्रनारायण यादवको हत्या नहुँदासम्म सीता यादव राजनीतिमा बेसरोकार सामान्य गृहिणी थिइन् । राजनीतिमा प्रवेश गरेको हिंसा र मुठभेडकै कारण उनको अन्यन्त सुखद पारिवारिक जीवन बर्बाद भएको हो । तर उनले यी कुरा भूलेझै देखिएको छ ।
गत बुधबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको आन्तरिक शक्ति संघर्षले विकृत रूपधारण गर्दा सिरहामा निकै ठूलो अप्रिय घटना भयो । उम्मेदवार चयनका क्रममा भएको विवादले दर्जनौं नेता तथा कार्यकर्ता सख्त घाइते भए । पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्दै घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बेलाका नेता तथा कार्यकर्ता कोही काठमाडौंका र कोही विराटनगरका अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । आफ्नो अनुकूलको सरकार भएको र चुनावको मिति पनि नजिकिँदै आएका कारण आक्रमणकारीहरू भने प्रहरी हिरासतमा छैनन् । प्रतिस्पर्धी पार्टीविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने अवस्थामा आफैंभित्र कुटाकुट र मारामार हुने अवस्था उत्पन्न भएको जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको सिरहा नगरपालिकामा हो ।
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीता यादव, पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, समाजवादी नेता प्रदीप गिरि, पुराना नेता अमियकुमार यादव, नेताहरू पद्मनारायण चौधरी, युवा नेता मोख्तार अहमदलगायत नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा ठूलो पहुँच राख्ने नेताहरू भएको जिल्ला हो सिरहा । उम्मेदवार चयनको विषयमा भएको सामान्य विवाद भौतिक भिडन्तमा परिणत हुनु नेपाली कांग्रेसकै बेइज्जती हो । त्यसमा पनि यो प्रकरणमा यस्ती नेतृ जोडिएकी छिन्, जसको राजनीतिक उदय अत्यन्त पीडादायी दुर्घटनाबाट भएको हो । आफ्ना पति चन्द्रनारायण यादवको हत्या नहुँदासम्म सीता यादव राजनीतिमा बेसरोकार सामान्य गृहिणी थिइन् । राजनीतिमा प्रवेश गरेको हिंसा र मुठभेडकै कारण उनको अन्यन्त सुखद पारिवारिक जीवन बर्बाद भएको हो । कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको सहानुभूतिका कारण उनी राजनीतिमा संलग्न भएको छोटो अवधिमै पार्टी जिल्ला सभापति, सांसद, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुँदै मन्त्री बनिन् ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भनेको अत्यन्त ठूलो सम्मानित र हैसियत भएको पद हो । मन्त्री बन्ने होइन कि बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी भएको पद हो यो । राजनीतिमा लागेको यति छोटो अवधिमा यति माथि पुग्ने सौभाग्य सायदै कुनै नेपालीले पाएका छन् । यो अवसरलाई उनले राजनीतिमा मुठभेड तथा हिंसाको प्रवेशलाई दुरुत्साहन गर्न र अन्तरपार्टी द्वन्द्व व्यवस्थापन मात्रै होइन, मुलुकको समग्र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्नुपथ्र्यो । उनले आफ्नो जीवन नै शान्ति तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्लिन् भन्ने आशाका साथ कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले त्यो पदमा पु¥याएका हुन् । तर सिरहा घटनाको मुख्य कारक उनी आफैं रहेको समाचार आएको छ । सीताले आफ्ना छोराका लागि मात्र होइन, आफ्ना लडाकु कार्यकर्ताका लागि पार्टी सभापति तथा सांसदलगायतमाथि खुकुरी प्रहार गर्न लगाइन् ।
प्रदेश २ अन्तर्गतका पालिकाहरूको निर्वाचनलाई नेपाली कांग्रेसले जीवनमरणको प्रश्न बनाएको छ । यो चुनावमा कांग्रेसले विगतको वर्चश्व कायमै राख्यो भने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र मियो पार्टीको अस्तित्व कायमै रहन्छ । पहिलो र दोस्रोे चरणको निर्वाचनमा भएको क्षतिलाई यसै निर्वाचनबाट पूर्ति गरी पहिलो पार्टी बन्ने उद्घोष नेपाली कांग्रेसले गरिसकेको छ । पदीय हिसाबले प्रदेश २ मा नेपाली कांग्रेसको शिखर व्यक्ति भनेकी कोषाध्यक्ष यादव नै हुन् । यदि उनी राजनीति बुभ्mने थिइन् भने पार्टीको मात्रै नभएर उनको व्यक्तिगत साखसँग पनि जोडिएको छ प्रदेश २ को निर्वाचन । १३६ वटै पालिकामा हाम्रा होइन, राम्रा उम्मेदवारलाई अघि सारेर नेपाली कांग्रेसको साख जोगाउने मुख्य दायित्व उनकै पनि हो । तर उनी आफ्नो गृहनगर सिरहामै चुकेका कारण उम्मेदवारको मनोनयनका दिनमै नेपाली कांग्रेसको साख अत्यन्तै तल गिर्ने समाचार आयो । त्यस घटनाले सिरहामा कति असर गर्छ, परिणामले देखाउला । अन्य जिल्लाको निर्वाचनलाई भने असर पु¥याइसकेको छ ।
एमाले, माओवादी र मधेसवादी पार्टीहरूका उम्मेदवारहरूको प्रचार प्रसार हुने समाचार आयो भने नेपाली कांग्रेसको चाहिँ आन्तरिक कलह र भिडन्तका कारण कार्यकर्ताहरू मरणासन्न हुनेगरी घाइते भएको समाचारले मिडिया भरियो । कोषाध्यक्षको गृहनगर भएका कारण सिरहा भनेको प्रदेश २ को चुनावी मुकाम हो । चुनावी मुकामबाटै यस्तो सन्देश प्रवाह भएपछि प्रदेश २ मा नेपाली कांग्रेस चिप्लिने पो हो कि ? भन्ने शंका उपशंका सुरु भएको छ । पदीय हिसाबले उनी आफ्ना छोरा सुभाषकी मात्रै अभिभावाक होइनन्, उम्मेदवारका जति पनि आकांक्षी थिए सबैकी अभिभावक हुन् । राजनीतिमा योगदान पु¥याएर भन्दा सहानुभूतिबाट पदीय राजनीतिमा आएकी सीताले आफ्नो छोराभन्दा योग्य, क्षमतावान राजनीतिमा योगदान पु¥याएका सयौं कार्यकर्ता सिरहा नगरपालिकामा छन् भन्ने कुरा सम्झन सकिनन् । यो ठूलो गल्ती पनि होइन । किनकि सुवर्णशमशेर राणा र कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक नेपाली कांग्रेसका प्रायः सबै अग्रजहरू परिवारवाद र नातावादमा फँसेको कलुषित इतिहास नेपाली कांग्रेसले बेहोरेको छ ।
मौका आउँदा नेताहरूले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनामा कुनै योगदान नपु¥याएका आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भाइभतिजा अघि सार्ने गरेको स्कुलिङ रहेको पार्टीकी कोषाध्यक्षका नाताले उनले छोरालाई मेयरका रूपमा अघि सार्नु अपराध हो भन्न सकिन्न । अरुले जे गरेको देखेकी छन्, त्यही गरिन् सायद । तर मेयर पदको उम्मेदवारमा आफ्ना छोरालाई आरक्षण गरिसकेपछि उपमेयर तथा वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा ‘हाम्रो होइन राम्रो’ लाई अवसर दिनुपथ्र्यो । आफ्नो छोराको जित सुनिश्चित गर्न पनि यस्तो गर्नु अनिवार्य थियो । तर अन्य पदमा पनि एकलौटी गरेपछि कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन् । असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई सम्झाउनुको सट्टा लाठीमुंग्री प्रयोग गरिएपछि भिडन्त भएको भन्ने समाचार आएको छ । आफ्नो छोरालाई चुनाव जिताउन उत्पेरित गर्नुपर्ने कार्यकर्तालाई अस्पतालमा उपचार गराउन जान बाध्य पारिनु भनेको आत्मघाती गोल हो । केही दिनअघि टिकट वितरणमा एकपक्षीय निर्णय भयो भनि बहिष्कार गर्ने सीताले नगरपालिकामा गरेको एकपक्षीय टिकट वितरणलाई कार्यकर्ताले कसरी जवाफ दिन्छन् ? आगामी राजनीतिको बाटो त्यसैले निर्धारण गर्ने छ ।
Tarun Khabar0response सोमबार,२६ भाद्र २०७४ 895 Views